Ikhibhodi yeHyperX Alloy Core kunye nemouse yePulsefire Core, uphononongo olunzulu | Iindaba zeGajethi
Ikhibhodi ye-HyperX Alloy Core kunye ne-Pulsefire Core mouse, amaqabane omdlalo ogqibeleleyo [SWEEPSTAKES]
UMiguel Hernandez | 02/09/2021 13:34 | Ukuhlaziywa ukuba 02/09/2021 13:40 | Imincintiswano, ngokubanzi, Reviews
Izixhobo ezinamagama Imidlalo Zizimveliso eziya zisiba yimfuno kwabo bachitha iintsuku ezinde zokuzonwabisa phambi kweliso, ke ngoko, imouse elungileyo kunye nekhibhodi ekhethekileyo zizinto ezibalulekileyo zokufumana iziphumo ezilungileyo emva kwemini yethu ende yedabi ledijithali. HyperX Kudala inikezela ngeemveliso ezisemgangathweni kwabona badlali babalaseleyo kangangeminyaka, kwaye ezi sizicazululayo namhlanje zizinto ezimbini ezisisiseko ezingasokuze zisilele kuseto lwakho.
Sikubonisa ikhibhodi yeAlloy Core kunye nePulsefire Core yokudlala imouse kwiHyperX ukuze ubonise izakhono zakho ngezixhobo ezilungileyo. Njengokuba oko kwakungonelanga, ngaphezulu koku unokufumana simahla kwaphela ngesi siqwenga sokwenza oku kuwe, ngaba uyakuphoswa?
Kutshanje sifikelele kubabhalisi abangama-10.000 kwiYouTube, apho ungafumana olona hlalutyo lukhulu kunye nezifundo, ke sigqibe kwelokuba sibhiyozele kunye nani nonke ngesandla HyperX, inkampani yayifuna ukusebenzisana ngokusinika ikhibhodi Ingxubevange Core kunye nempuku Ingqungquthela yomlilo, Ezona mveliso zimbini zibaluleke kakhulu kuseto olulungileyo, ke sikushiya apha uhlalutyo ngalunye lwezi mveliso, kwaye ngaphezulu kwako konke Siyakumema ukuba uthathe inxaxheba kwi-raffle, kwaye sikushiya ngaphantsi kweemeko zokuthatha inxaxheba:
Ngaba uyafuna ukuphumelela le keyboard kunye nempuku yemouse @HyperX? Thatha inxaxheba yethu #ukuze kwaye ufumane iPulsefire Core yokudlala imouse kunye neAlloy Core keyboard.
Ingxelo: #HyperXActGadget#Lottery #Umdlalo #HyperX #Izixhobohttps://t.co/UzTO2w2DGA
Iindaba zeGadget (@agadget) Septemba 2, 2021
1st landela iHyperX kunye neActualidadGadget kwi-Twitter
2nd ubhalise kwisiteshi seYouTube seActualidadGadget
Okwesithathu Nika i-RT kumzobo we-tweet
Ingcaciso ye-4 nge-hashtag #HyperXActGadget
5th Uyakuphumelela ukuthatha inxaxheba okongezelelekileyo ukuba uyahlomla kwividiyo
Sijongene nomzobo wesizwe, ophumeleleyo kufuneka abe nokuhlala kummandla wesizwe (eSpain). Siza kunika ophumeleleyo kokubini kwizimvo zevidiyo yeYouTube nakwiakhawunti yethu yeTwitter. Ophumeleleyo kumzobo uza kubhengezwa kwiRRSS nakwitshaneli yethu nge-10/09/21 ngo-12: 00 iiyure.
1 Ikhibhodi yeHyperX Alloy Core
2 Imouse ye-HyperX Pulsefire Core Mouse
Ikhibhodi yeHyperX Alloy Core
Le keyboard inwebu HyperX unazo ezinye ubukhulu 443,2 iimilimitha ububanzi; I-175,3 millimeters ubunzulu kunye ne-35,6 yeemilimitha ukuphakama, ngenxa yoko sifumana ikhibhodi enobungakanani obupheleleyo, okt phakathi kwama-104 kunye nama-105 amaqhosha ngokwemigangatho yentengiso. Malunga ne ubunzima, ngaphezulu kancinci kwekilogram ukuyilungisa kakuhle etafileni (ngakumbi i-1.121 gram).
Sithetha ngekhibhodi enentambo eboshiweyo, enobude beemitha eziyi-1,8, ngokwaneleyo ukuba "zifihle" iintambo ngokuseta kwethu kwaye zikwenze kukhanye kangangoko kunokwenzeka.
Ngokubhekisele kubuchwephesha bobuchwephesha, siyakhumbula ukuba yibhodi yezitshixo, inonxibelelwano I-USB 2.0 kunye nesantya sokuvota nge-1.000 XNUMX Hz.
Sine «imowudi yomdlalo» ukwandisa amanqaku, kwaye njengayo nayiphi na ikhibhodi elungileyo Imidlalo inwebu, sijonge kwikhibhodi enganyangekiyo ekuchithekeni kolwelo. Sikwanothotho lwamaqhosha okufikelela ngokukhawuleza esivumela ukuba silungelelanise ukukhanya, iindlela zokukhanyisa kunye nemowudi yomdlalo, into esiyithandayo xa sinxibelelana neemenyu ezahlukeneyo zokonga ixesha.
Singakwazi nokuba, ukuba sinqwenela, ukutshixa ikhibhodi. Inebha yokukhanya eneziphumo ezithandathu zokucwangciswa ngaphezulu: Umjikelo wombala, amaza ombane, ukuphefumla, okuqinileyo, imimandla emihlanu, kunye ne-aurora. Konke oku kukhanya kuthi kugqithiselwe kwindawo ephambili, ethi ikhanyise ngokufanayo, kodwa ukuba sikhetha, kwisoftware sinokuzilungisa ngokuzimeleyo izitshixo. imimandla emihlanu enemibala.
Ukuba yikhibhodi yeembrane, inika impendulo elungileyo Kwaye umahluko obonakalayo ukusuka kwiikhibhodi zoomatshini, inyani yokuba ithule kakhulu. Ngendlela efanayo, ukuhamba kwezitshixo kuyafana kakhulu nekhibhodi yoomatshini kwaye kunempendulo ekhawulezileyo. Le keyboard, ukongeza kuhambelwano lweWindows, Iyahambelana nePS4, PS5, Xbox Series X / S kunye neXbox One. Ngaphandle kwamathandabuzo, enye indlela enomdla kakhulu ejikeleze i-50 euro kwiwebhusayithi esemthethweni ye HyperX nangaphakathi Iivenkile eziqhelekileyo.
Imouse ye-HyperX Pulsefire Core Mouse
Imouse ibaluleke okanye ibaluleke ngakumbi kunebhodibhodi elungileyo, ke ngoku siyaqhubeka ukuhlalutya iqabane elifanelekileyo, iPulsefire Core evela IHyperX. Sine-ergonomic mouse enemilinganiselo enobungakanani be- I-119,3 yeemilimitha ubude, nge-41,30 yeemilimitha ukuphakama kunye ne-63,9 yeemilimitha ukuphakama. Ubunzima, ukuba asiyibali intambo Iigram ezingama-87, ngentambo inyuka ifike kwi-123 gram, ke le mouse ilula ngaphakathi kwecandelo layo.
Intambo, iinkcukacha ezibalulekileyo, Kubude beemitha eziyi-1,8, ukuze ukwazi ukufumana ukuhamba kwaye uhlengahlengise ngokulula kwiimfuno zokuseta. Le ntambo ye-USB yi-2.0 teknoloji.
Ukusebenza kwintsebenzo ngenzwa IPixart PAW3327 ngesisombululo se-6.200 dpi kunye nochungechunge lwe-presets kunye neqhosha eliphezulu le-800/1600/2400 kunye ne-3200 dpi ngokokungcamla komsebenzisi ngamnye. Isantya yi-220 IPS kwaye ukukhawulezisa okuphezulu yi-30G. Masidubule amaqhosha asixhenxe, aqinisekisa ixesha lokuphila lokucofa izigidi ezingama-7.
Izibane azibikho Ii-RGB ze-LED ezinendawo enye yokukhanyisa kunye namanqanaba amane okukhanya ukuze sikwazi ukuyilungelelanisa ngokokuthanda okanye iimfuno zethu. Kwinxalenye yayo, ine I-1000 Hz yokuvota kunye nefomathi yedatha ye Iibhithi ezili-16 / i-axis. Njengakwikhibhodi yangaphambili, le mouse iyahambelana nePC, kunye nePS5, PS4, Xbox Series X / S kunye neXbox One, ngenxa yoko ukungqinelana akufuneki kube ngumcimbi.
Sinoluhlu lweziketi ezinobungakanani obudumileyo kwaye zinamacandelo abucala kwibhokisi uqobo. Iyafana nekhibhodi, isoftware yokukhuphela simahla HyperX NGenuity Iya kusivumela ukuba senze naluphi na uhlengahlengiso, ngakumbi kulwenziwo lwezibane. Amaqhosha asixhenxe aso anokucwangciswa ngokupheleleyo. Ngokwenxalenye yayo, imouse inexabiso eliphakathi neliza kuhlala malunga nama-euro angama-35 kwiwebhusayithi esemthethweni ye HyperX nangaphakathi ezinye iivenkile.
Ikhibhodi efanelekileyo kunye nemouse combo kubadlali abaninzi ngamaxabiso afanelekileyo, Ulinde ntoni ukuba uthathe inxaxheba kwi-raffle yethu kwaye ufumane le paki yasimahla kunye nepakethi yemouse? Ungalahli eli thuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Ikhibhodi ye-HyperX Alloy Core kunye ne-Pulsefire Core mouse, amaqabane omdlalo ogqibeleleyo [SWEEPSTAKES]
Ukuthatha inxaxheba kwirafuli